कोरियन कम्पनीहरुले भने नेपालमा पढाइ हुने भाषा कक्षा गतिलो भएन :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
नेपालमा सिकाइने कोरियन भाषाका कक्षा प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । जथाभावी खुलेका संस्थाले परीक्षालाई मात्रै केन्द्रित गरेर कोरियन भाषा पढाउनाले प्रभावकारी नदेखिएको कोरियन कम्पनीले गुनासो गरेका छन् ।
कोरियामा नेपालीको आत्महत्या र सुतेकै ठाउँमा ज्यान गुमाउने कारण बुझ्न गएको नेपाली प्रतिनिधिसँग कोरियन कम्पनीले भाषा नै मुख्य कारण भएको समेत बताएका छन् । नेपालबाट गएका धेरै नेपालीले कोरियन भाषामा कुरा गर्न नजानेको कम्पनीले गुनासो गरेको इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाले बताए ।
कोरियन भाषा कक्षा सञ्चालन गर्न भन्दै जथाभावी संस्था खुलेका छन् । भाषा कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भए पनि धेरै संस्था अनुमतिबिनै चलेको निर्देशक खतिवडाले बताए । कोरियन भाषाका लागि एचआरडी कोरियाले नै कोर्ष तयार गरे पनि पढाइ प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
कोर्ष तीनदेखि चार महिना पढाउँछन् । एचआरडी कोरियाले लिने परीक्षामा टिकमार्क लगाएर उत्तर दिने र कोटाअनुसार बढी अंक ल्याउने छनोटमा पर्ने प्रणाली छ । नेपालमा कोरियन भाषा सिकाउने संस्थाको समेत अभिलेख छैन । कोरियन कम्पनीले नेपाली टोलीसँग भाषा राम्रोसित बोल्न सक्ने बनाएर पठाउनसमेत माग गरेका छन् ।
दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपालीले आत्महत्या गर्नुको कारण भाषाको समस्या र कामको बढी चाप रहेको पाइएको हो । भाषा नजान्दा आफ्नो समस्या भन्न नसक्ने र काम धेरै गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तनावमा आत्महत्या गर्ने गरेको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
कोरियामा शिक्षित युवा जाने गरेको तर कडा परिश्रम पर्ने काम गर्नुपर्दा त्यसको तनावले आत्महत्या गर्ने गरेको शाखाका निर्देशक खतिवडाले बताए । उनका अनुसार धेरैजसो स्नातक, स्नातकोत्तर पढेका युवा कोरिया पुगेका छन् ।
यस्तै त्यहाँको चिसो वातावरण र साहुको दबाब पनि आत्महत्याको कारण रहेको टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । मानसिक रोग र मुटुरोगका विशेषज्ञ डाक्टरसहितको टोली कोरियामा नेपालीको मृत्यु बुझ्न दुई सातापहिले कोरिया गएको थियो ।
कोरिया पुग्नासाथ दिइने तीनदिने अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली टोलीले आग्रह गरेको छ ।
नेपालीले काम गर्ने उद्योग तथा कृषि फार्ममा पनि टोलीले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा नेपालीले बढी काम गर्नुपरेको र साहुले दिने दबाबका कारण रक्सी खाने अनि सुतेकै अवस्थामा ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको छ । कम्पनी साहुले भने नेपाली कामदारले भाषा नजानेका कारण उनीहरूलाई काम गर्न गाह्रो भएको बताएका थिए ।
कोरिया पुग्नासाथ दिइने तीनदिने अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली टोलीले आग्रह गरेको छ । मानसिक रोग अस्पताल लगनखेलका निर्देशक डा. मोहनराज श्रेष्ठ र वीर अस्पतालका कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिष्ट डा. रामकिशोर शाहसहितको टोलीले स्वास्थ्य जाँच गर्दै कामदारलाई परामर्श दिएको छ । टोलीले केही दिनमा प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्देशक खतिवडाले बताए ।
सन् २००८ देखि इपिएसमार्फत् कोरिया जान थालेपछि ८१ जना नेपालीको ज्यान गएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै आत्महत्या र सुतेकै ठाउँमा ज्यान गुमाउने रहेका छन् । यस वर्ष मात्रै १७ जना नेपालीले कोरियामा ज्यान गुमाइसकेका छन् । इपिएसमार्फत् झण्डै ५१ हजार नेपाली रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका छन् ।